China Welding Assembly Mugadziri uye Mutengesi | ZHJ
Welding Assembly simulation inoderedza mutengo muzvikamu zvakasiyana zvebudiriro yechigadzirwa, sekugadzira, kuronga kwekugadzira, kuyedza-uye kugonesa kwekusimbisa.
Isu tinounza B-5000 yekumachina muchina kubva kuBihler kuGerman, tinogona kusimbisa 200-300pcs pamaminitsi.
Maitiro maviri ekutanga anoshandiswa mukubata Welding: zvidimbu zveumwe munhu zvakasunganidzwa pane yakasimba kana pre-yakadhonzwa mitsara yekutakura kana iyo yakadhonzwa zvikamu zvekubatana zvinogadzirwa kubva kuhafu-yakapera tambo ine yakatove yakasungirirwa yekuonana zvinhu. Panguva yekuwelda yezvidimbu zvekutaurirana zvinhu zvekubatanidza zvakasunganidzwa kubva kune mamwe ma profiles (matepi), zvikamu zve waya kana fomu yetipi. Iyo yekudyidzana nzvimbo yekubata saizi yeiyo yakakwira mwero kutenderera uchichengetedza padyo rekugadzira mamirioni ndeye 5 x 5 mm².
Zvichienderana nechishandiso chekutaurirana chakashandiswa zvinoenderana negoridhe, palladium kana sirivheri. Kuti ushandise yakatendeseka uye ine hupfumi hwekugadzira maitiro zvinhu zvekubata zvinowanzove nerutsigiro rwusinganetsi.
Strip uncoiling-strip yekumisikidza-Pre kubaya-Mari uye weld-Yekupedzisira kubaya
Ag, AgNi, AgCu, AgFe, nezvimwe.
Bata waya dhayamita renji
-0.4 - -2.5 mm
Longitudinal Welding mutsetseContact waya dhayamita, l Inotenderera inotenderera mutsara≥1 / 2Contact waya dhayamita
Yakatsikwa zvikamu zvine semi-apedza kuonana mabara
Yakatsindirwa zvikamu kubva kuhafu-yakapera yekubatana tambo inoburitswa nehupfumi kubva kuenderera mberi tambo. Zvekubata zvinhu zvinogadzirwa munzvimbo yedu yekugaya zvinoenderana nendarama, palladium uye sirivheri. Mhangura nemhangura alloys zvinoshandiswa sehwaro hwekutakura zvinhu.
Mazhinji maficha ekutaurirana anoda mukobvu wakakosha simbi matete. Izvi hazvigone kuiswa kune substrates hupfumi nemaelectroplating maitiro. Pamusoro pezvo zvinhu zvekubata zvine zvakasarudzika zvepanyama uye zvemuchina zvivakwa zvinowanzodiwa. Izvi zvinhu zvinobva kugoridhe-palladium alloys kana yakavakirwa pane sirivheri inogadzirwa neyakavezwa kusanganisa kana poda simbi. Iko kusanganiswa kwekubatana uye nesisitimu yezvinhu kunowanikwa necadding maitiro senge inotonhora roll-yekuvhara kana kupisa roll-kusunga.
Zvidimbu zvikamu kubva kuToplay Profiles
DODUCO inogadzira mabimetal ekubatana mune strip fomu nekusunga kweye flator yakaumbwa mitsetse kune anotakura zvinhu zvichiteverwa neprofile rolling. Idzi ndidzo hwaro hwevatengi dzakatarwa zvikamu zvekubatana nezvakasimudzwa zvakakosha simbi zvikamu zvekuda zvakanyanya kunyorera.
Akadzvanywa Zvikamu kubva kune seam-welded strips
Mukana wakanyanya wekusona-yakasungwa mbichana zvinhu zvekugadzira kweasina stampings inzvimbo ishoma yenzvimbo ye weld zone. Izvi zvinoguma nekupfavisa kwematsutso akaomarara epasi zvigadzirwa chete munzvimbo yekukurumidza weld yakaitwa nzvimbo. Iwo ekutaurirana akaturikidzana ane anonyanya akasimba kuonana zvinhu kana rinoumbwa kuonana profiles kana weld.
Pashure: Kumutsa Gungano
Zvadaro: Welding bhatani vokukurukura
Bata Assemblies ye AC Contactor
Bata Assemblies yeMCCB